China 3K Full Carbon Fiber round Tubes desgin desgin abakhiqizi nabaphakeli |Feimoshi
3K OkugcweleI-Carbon Fiber Tubeskanye Nezixhumi
I-Carbon Fiber Tubeisetshenziswe kabanzi emikhakheni ye-hitech, njenge-aerospace, imishini yokuthunga yesimanje, imboni ye-petrochemical, imishini yezokwelapha, izimoto, ukukhiqizwa kwemishini, ukwakhiwa, izinto zezemidlalo nezokuzijabulisa, ezokuxhumana, ukufudumeza kukagesi njll.
Amashubhu asongwe nge-carbon fiber roll alungele zonke izinhlobo zamaphrojekthi wokwakha adinga ishubhu lezemidlalo elinesisindo esincane elisebenza kahle elingabhekana namandla avela kunoma iyiphi indlela.
Noma yikuphi ukungena ku-pls zizwe ukhululekile usazise.
1. Sicela uxhumane ngokukhululekile futhi usinikeze imidwebo yakho kanye nokucaciswa kwakho;
2. Sizokucaphuna ezinsukwini ezi-1-3;
3. Ama-oda adinga ukukhokha inani lentengo yokuthenga engaphezu kwamaphesenti angama-30 wenkokhelo ephansi;
4. Qinisekisa isampula;
5. Ukukhiqizwa kweqoqo;
6. Yazisa ikhasimende ukuthi lihlole iphakheji;
7. Amakhasimende akhokha imali esele;
Kuzo zonke izingxenye, uma unombuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Ingabe ufuna i-3K Full Carbon Tubes Manufacturer & nomphakeli?Sinokukhetha okubanzi ngezintengo ezinhle ukukusiza ukuthi udale.Wonke ama-Carbon Fiber Booms aqinisekisiwe ikhwalithi.Siyi-China Origin Factory of Carbon Tubes and Connectors.Uma unombuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Okwedlule: Ishidi le-Plain weave elicwebezelayo noma le-matte carbon fiber
Olandelayo: Ikhwalithi ehamba phambili yaseChina I-High Temperature Resistant Carbon Fiber Fabric Plate, Ishidi le-Carbon Fiber engu-3K
3K twill matte isikwele esigcwele carbon fibre tube/Bo...
ngokwezifiso 15mm 3K twill matte carbon fiber amashubhu
Roll-Egoqwe 100% carbon fibre tube/boom/ipayipi 6...
I-carbon fiber tube boom enombala
amandla embonini aphezulu angu-3K angenalutho eyindilinga I-Carbon Fi...